စဉ်းစားကြစေလိုပါတယ် ( ၇၄ ) ( ခိုးရာပါ ပစ္စည်း လက်ခံသူ ) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Think Different » စဉ်းစားကြစေလိုပါတယ် ( ၇၄ ) ( ခိုးရာပါ ပစ္စည်း လက်ခံသူ )
စဉ်းစားကြစေလိုပါတယ် ( ၇၄ ) ( ခိုးရာပါ ပစ္စည်း လက်ခံသူ )
Posted by Foreign Resident on Jun 24, 2014 in Think Different | 8 comments
ဒီ Post လေးကတော့ ၊
သည်လေဒီးစ် နယူးစ်ဂျာနယ် ၊ အတွဲ (၂) အမှတ်စဉ် ၁၈ ထဲမှာ ၊
ဆောင်းပါးရှင် ဇော်မင်းထွန်း ရေးသားထားတဲ့ ၊
” မဟာသန္တိသုခကျောင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ဆရာတော်အရှင်ဆန္ဒာဓိက မိန့်ကြားချက် “
ဆောင်းပါး နှင့် ပါတ်သက်ပြီး ရွာသူား တို့ရဲ့ အမြင်ကို သိချင်လို့ပါ ။
ပထမဦးဆုံး အဲဒီ ဆောင်းပါးလေးကို အရင် တင်ပြပါရစေ ။
မဟာသန္တိသုခကျောင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ဆရာတော်အရှင်ဆန္ဒာဓိက မိန့်ကြားချက်
“ကျောင်းကိုသိမ်းယူတယ်ဆိုတာ ခိုးယူတာနဲ့အတူတူပါပဲ။ ခိုးယူပြီးတော့မှ အပ်နှံတယ်ဆိုတော့
အပ်နှံခံရတဲ့ ဒုတိယမြောက်လက်ခံသူက ခိုးရာပါပစ္စည်း လက်ခံတာနဲ့ အတူတူပါပဲ။
ပီနန်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကို လှူစေချင်ပါတယ်ဆိုပြီး လက်မှတ်ထိုးမယ့် သံဃာတော်တွေက
၉၉.၉၉ ရာခိုင်နှုန်းရှိတယ် ”
တကယ်လို့သာ ဆရာတော်ကြီး တွေက သူတို့ကိုခွင့်လွှတ်ပေးလိုက်ပါ ကွာဆိုရင်
အဲဒီတော့ လူဝတ်ကြောင် ဒကာမကြီးဒေါ်အောင် ဆန်းစုကြည်တောင်မှ ခွင့်လွှတ်နိုင် တယ်ဆိုရင်
ဗုဒ္ဓဘာသာပြန့်ပွားရေး အတွက် လုပ်ဆောင်နေတဲ့ သံဃာ တော်တွေကို
ဘာမှခွင့်မလွှတ်နိုင်စ ရာအကြောင်း မရှိဘူးလို့ မြင်ပါတယ်။
အဲဒီတော့ ဆရာတော်သံဃာတော် တွေအနေနဲ့ ခွင့်လွှတ်နိုင်မယ်လို့ ယုံ ကြည်ပါတယ်။
ခွင့်လွှတ်နိုင်တဲ့တစ် နေ့ အမြန်ဆုံးရောက်ပါစေ လို့လည်း ဆုတောင်းပါတယ်။
သန္တိသုခကျောင်းတိုက်ပိုင်ဆိုင်မှု နဲ့ပတ်သက်ပြီး သတင်းစာတွေထဲမှာ လည်းပါနေပြီးသားပဲလေ။
ပီနန်ဆ ရာတော်ဘုရားကြီးဆိုတာ ဦးဇင်းတို့ စာသင်သားဘ၀ကတည်းက
ဆရာ တော်ဘုရားအတ္ထုပ္ပတ္တိတို့၊ စာရေးဆ ရာတွေကရေးထားတာ
အင်မတန်မှ ကြည်ညိုလေးစားခဲ့တဲ့ ဆရာတော် ဘုရားကြီးပါ။
ပြည်ပသာသနာပြုလုပ် ငန်းတွေ စွမ်းစွမ်းတမံဆောင်ရွက်ခဲ့ တာပေါ့နော်။
အဲဒီတော့ မြန်မာပြည် ပြန်ရောက်လာတော့လည်းပဲ
မြန်မာ နိုင်ငံကနေ ကမ္ဘာအနှံ့ သာသနာပြု နိုင်တဲ့ သာသနာ့အာဇာနည် ပုဂ္ဂိုလ် တွေ
အများကြီး ပေါ်ပေါက်လာအောင် ဖော်ထုတ်ခဲ့တယ်။
အဲဒီတော့ သူ့ကို ကူညီခဲ့တာ ပြည်တွင်းပြည်ပက လူ တွေအများကြီးပါတယ်။
နိုင်ငံတော် လူကြီးပိုင်းဆိုင်ရာက တချို့လည်းပါ တယ်ပဲပြောရမှာပေါ့နော်။
အဲဒီတော့ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် တစ်ဦးတစ်ယောက် တည်း ကုသိုလ်ကတော့ မဟုတ်ဘူး ပေါ့နော်။
နိုင်ငံတော်အစိုးရပိုင်ငွေနဲ့ နိုင်ငံတော်တစ်ခုတည်းရဲ့ကောင်းမှုနဲ့ ဆောင်ရွက်ထားတာ မဟုတ်ဘူး။
ဆရာတော်ကို ကြည်ညိုကြတဲ့ အ လှူရှင်အားလုံးရဲ့ ကောင်းမှုနဲ့တည် ဆောက်ထားတာ
ရေစက်ချကတည်း က သံဃာကိုလှူဒါန်းတာ။
သံဃာ ကို လှူတယ်ဆိုပေမဲ့လို့ ဒီကျောင်းကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်မယ့် ပုဂ္ဂိုလ် ကတော့
အများဒကာ၊ဒကာမတွေ သတ်မှတ်ထားတဲ့ ဆရာတော်ကိုပဲ လှူဒါန်းတာ။
ဆရာတော်ဘုရားကြီး ကိုပဲ ဒီကျောင်းကို အုပ်ချုပ်စီမံဖို့အ တွက် လှူဒါန်းထားပြီးသား။
နောက် ပိုင်းကျတော့မှ အခြားအဖွဲ့တစ်ခုကို လွှဲပြောင်းလိုက်တယ်ပေါ့နော်။
မဟန က ပိုင်တယ်လို့ပြောလို့မရဘူး။ ဆိုင် တာပေါ့လေ။
ပီနန်ဆရာတော်ဘုရား ကြီးကတော့ သူ့ကိုလှူဒါန်းထားတဲ့အ တွက်ကြောင့်မိုလို့ ပိုင်တာပေါ့နော်။
၂ နှစ်သင်တန်းပေးတဲ့အချိန်တုန်း က ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်တုန်းက ဦးဇင်း တို့ရောက်ဖူးပါတယ်။
အဲဒီကျောင်း မှာ အင်မတန်မှအေးချမ်းပြီးတော့
စာရေးလို့လည်း ကောင်း၊ တရားအား ထုတ်လို့လည်း ကောင်းတဲ့နေရာ။
အဲ ဒီကတည်းက ဒီကျောင်းကိုထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်ကြတဲ့ ဂေါပကခေါင်း ဆောင်တချို့ရဲ့
ငွေကြေးအလွဲသုံးစား မှုတွေ သတင်းတော့ ကြားနေရတာ ပေါ့လေ။
အဲဒီတော့လည်း ဘာတွေ ဖြစ်မလဲဆိုတာမျိုး သံသယဖြစ်နေ ကြတာပေါ့လေ။
နောက်ဆုံးကျတော့ သူတို့ရဲ့အပြစ်တွေကို ဖုံးကွယ်ချင်တဲ့ အတွက်ကြောင့်
ဆရာတော်ဘုရား ကြီးက နိုင်ငံရေးလုပ်နေပါတယ်၊ အ စိုးရကိုဆန့်ကျင်နေပါတယ်နဲ့
အဲဒီ တုန်းက ဒကာကြီးဦးခင်ညွန့်က ဒီ ကျောင်းကို ပြန်လည်သိမ်းယူလိုက် တာပေါ့။
အဲဒီတော့ ဆရာတော်ဘု ရားကြီးကို လှူဒါန်းထားတဲ့အတွက် ကြောင့် သိမ်းယူပိုင်ခွင့်မရှိဘူး။
တစ် နည်းပြောရင်တော့ သံဃာကိုလှူထား တာမိုလို့ ပီနန်မပိုင်ဘူး၊ မဟနပဲပိုင် တယ်ဆိုတော့
သံဃာကိုလှူထား တယ်ဆိုမှတော့ အစိုးရလည်း ပြန် လည်သိမ်းယူပိုင်ခွင့်မရှိဘူး။
ဆရာ တော်ဘုရားကြီးကိုယ်တိုင်က ကြည် ကြည်ဖြူဖြူ ကျေကျေနပ်နပ်နဲ့
စွန့် လွှတ်လိုက်တာမဟုတ်တဲ့အတွက် ကြောင့်
ဒီကျောင်းကို သိမ်းယူတယ် ဆိုတာ ခိုးယူတာနဲ့အတူတူပဲပေါ့နော်။
ခိုးယူပြီးတော့မှ အပ်နှံတယ်ဆိုတော့ အပ်နှံခံရတဲ့ ဒုတိယမြောက်လက်ခံ သူက
ဒါပေမဲ့လည်း အကြောင်းမညီညွတ်လို့ ပြန်ပေးပိုင် ခွင့်မရှိဘူး၊
အခုချိန်မှာ မူလပိုင်ရှင် ကပဲ ဒီကျောင်းကို အုပ်ချုပ်စီမံပြီး တော့
ကမ္ဘာ့သာသနာပြုအာဇာနည် ပုဂ္ဂိုလ်တွေ အများကြီး ပေါ်ပေါက် လာအောင် ပြုစုပေးတော့မယ်၊
မွေး ထုတ်ပေးတော့မယ်ဆိုပြီး သတင်း စာထဲမှာ ကြေညာတာပဲလေ။
အဲဒီ သင်တန်းတွေသာ ဆရာတော်ဘုရား ကြီး ဖွင့်ခွင့်ရမယ်ဆိုရင်တော့
ကမ္ဘာ့ သာသနာပြုပုဂ္ဂိုလ်တွေ အများကြီး ပေါ်ထွက်လာမှာပေါ့။
ဒါပေမဲ့ ဆရာတော် ဘုရားကြီးက ပြည်ပနိုင်ငံတွေမှာ
နှစ် ပေါင်း ၂၀ ကျော်သာသနာပြုခဲ့တာ ဆိုတော့ ပြန်လည်မျှဝေတဲ့အခါမှာ
စာသင်သားတွေ နိုင်ငံခြားသွားတဲ့ အခါ ပညာအရည်အချင်းတွေနဲ့ ပြည့် စုံသွားကြတယ်။
ပြီးတော့ ဆရာတော် ဘုရားကြီးမှာ ကျောင်းတွေ ကမ္ဘာအ နှံ့မှာ ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်း
ဒီ သင်တန်းမှာအောင်မြင်သွားတဲ့ ပညာ အရည်အချင်းပြည့်ဝသွားတဲ့ သံဃာ တော်တွေဟာ
ပြည်ပသာသနာပြု လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်လည်း ချက်ချင်း လက်ငင်းရကြရမယ်ပေါ့လေ။
အခု ခေတ်စကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင် အရပ် ဘက်ဆေးတက္ကသိုလ်က ဆရာဝန် ဖြစ်သွားတဲ့ လူတွေက
ဆရာဝန်ဖြစ် သော်ငြားလည်း အလုပ်အကိုင် အ ခွင့်အလမ်းမသေချာဘူး။
ဒါပေမဲ့ တပ် မတော် ဆေးတက္ကသိုလ်ကနေ ဘွဲ့ ရသွားတဲ့ လူတွေကတော့
ချက်ချင်း ရာထူးလည်းရတယ်။ နေရာဌာနက လည်း ရတယ်။
အဲဒီတော့ ဆရာ တော်ဘုရားကြီးရဲ့ကျောင်းတိုက်က တော့ အဲဒီလိုအခွင့်အလမ်းပေးနိုင် တာပေါ့လေ။
ဒါကြောင့်မို့ ဒီကျောင်း တော်ကြီးကို ဆရာတော်ကြီးကိုယ် တိုင်အုပ်ချုပ်စီမံပြီးတော့
သာသနာ ပြုခွင့်မရတာဟာ အင်မတန်ဝမ်းနည်း စရာကောင်းတယ်။
မြတ်စွာဘုရားရှင်လက်ထက်က တည်းက ရှိခဲ့တဲ့ ရှင်သာရိပုတ္တရာ၊ အရှင်မဟာမောကလန်
အစရှိတဲ့ အ ရိယာသံဃာတော်တွေ အရှင်သူမြတ် ကြီးတွေ အပါအ၀င်ပေါ့နော်။
ခေတ် တစ်လျှောက်လုံးရှိခဲ့တဲ့ သံဃာတော် တွေအားလုံးရော၊
အခုလောလော ဆယ်ပုစ္စုပ္ပန်မှာ ရှိနေကြတဲ့ သံဃာ တော်တွေအားလုံးရော
ထိုင်း၊ လာအို၊ ကမ္ဘောဒီးယား အစရှိတဲ့ သံဃာ တော်တွေ
တစ်ကမ္ဘာလုံး အရှေ့၊ နောက်၊တောင်၊မြောက် သံဃာတော် တွေအားလုံးရော
နောင်တစ်ချိန်မှာ ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ သံဃာတော်တွေ အားလုံးရော
အတိတ်၊ ပစ္စုပ္ပန်၊ အ နာဂတ်ကာလသုံးပါးလုံးမှာ ရှိရှိသမျှ သော သံဃာအားလုံးကို လှူဒါန်းတာပါ။
ကျောင်းတိုက်တစ်ခုချင်း စီမံတာ ကျတော့ ပဋိကတ်တော်မှာလည်း ရှိ ပြီးသား။
ဂေါပက ဆိုတာ လုံခြုံစေသူ တို့ အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။
မြန်မာလိုဆိုရင် တော့ ဒီကျောင်းတိုက်ကို ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်တဲ့သူပေါ့။
သံဃာတော်အားလုံး လက်ခံ ထားတာက ဒီမဟာသန္တိသုခကျောင်း တိုက်ကို
ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်သူ ဟာ ပီနန်ဆရာတော်ဘုရားကြီးပေါ့။
ငါးသိန်းသော သံဃာတော်တွေကို လက်မှတ်ထိုးခိုင်းမယ်ဆိုရင်
ပီနန် ဆရာတော်ဘုရားကြီးကို လှူစေချင်ပါ တယ်ဆိုပြီး လက်မှတ်ထိုးမယ့်သံဃာ တော်တွေက
Ref : https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1506846582877762&set=a.1466970310198723.1073741829.1466965966865824&type=1
” သန္တိသုခအရေး နှင့် ဦးဆန်းဆင့် ဖြုတ်ခံရမှု အပေါ် ဦးဝီရသူ နှင့် ဦးပါမောက္ခ အမြင် “
( ဧရာဝတီ သတင်း ဋ္ဌာန )
ဦးပါမောက္ခ Says :
” မဟာသန္တိသုခ ကျောင်းဟာ ၁၉၉၅ ခုနှစ်မှာ ပီနန်ဆရာတော်ကြီးရဲ့ နာမည်နဲ့ နှစ် ၆၀ ဂရန်ပေါက်တယ်။
၁၉၉၉ ခုနှစ်မှာ ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ အလှူရှင် တွေနဲ့ ကျောင်းတော်ကြီး ကိုဆောက်လုပ်ပြီး
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ၊ ဗိုလ်ချုပ် မောင်အေး၊ ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွှန့်တို့က ပီနန်ဆရာတော်ကို ရေစက်ချလှူဒါန်းတယ်။
၂၀၀၀ ခုနှစ်မှာ ကျောင်းရေစက်ချ ပွဲလုပ်ပြီး ဂရန် ထက်ခိုင်တဲ့ ပတ္တာ စာချုပ်ကို ရရှိတယ်။
အဲဒီမှာ စင်ကာပူက ပီနန်ဆရာတော်ရဲ့ ကိုယ်စား ဦးစောမြင့်လို့ ပါလာတယ်။
ပီနန်ဆရာတော် ရယ်လို့ တိုက်ရိုက်တော့ မပါဘူး။
စိတ်ချရတဲ့ ဒကာတယောက်က ကိုယ်စား နဲ့ ကျလာတယ်။ “
” ဦးဆန်းဆင့်က ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ၀န်ကြီးချုပ်ကနေ ပြောင်းလာတဲ့သူပါ။
ရောက်တာ ၁ နှစ်လောက်ပဲ ရှိသေးတယ်။
ဦးဆန်းဆင့်ဟာ ဦးအံ့မောင်ရဲ့ လှည့်ကွက်ထဲ ၀င်သွားတယ်လို့ ထင်တယ်။
ဦးအံမောင်ဟာ နှစ် ၅၀ ဆယ်လောက် ဘုန်းကြီးတွေဆီက
ချော့တလှည့်၊ ခြောက်တလှည့်နဲ့ တောင်းပြီး စားသောက်နေတဲ့သူပါ။
အဲတော့ ဦးအံ့မောင်ရဲ့ လှည့်ကွက် တွေကို ဦးဆန်းဆင့်က ဘာမှ မသိနိုင်ဘူး။
ရာထူးအနေအထားက ၀န်ကြီး ဖြစ်နေသော်လည်း လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှု၊ လိမ်လည်မှုတွေက
ဦးအံ့မောင်ရဲ့ အကျင့်တွေကို ဦးဆန်းဆင့်က ဘယ်လိုမှ မသိနိုင်ဘူး။
ဦးအံ့မောင်ရဲ့ လှည့်ကွက်ကြောင့် ဦးဆန်းဆင့်က ကြားထဲက ထိုးကျွေးခံလိုက်ရတယ်လို့ မြင်တယ်။
ဦးဆန်းဆင့်ဝန်ထမ်းတယောက် ရာထူးကနေ ထုတ်ပယ်ခံလိုက်ရတာ ၀မ်းနည်းတယ်။
Ref : ” သန္တိသုခအရေး နှင့် ဦးဆန်းဆင့် ဖြုတ်ခံရမှု အပေါ် ဦးဝီရသူနှင့် ဦးပါမောက္ခ အမြင် “
အကြမ်းဖျင်း ပြောရမယ် ဆိုရင် ၊ ကျနော်ကတော့ ၊
ဆရာတော်အရှင် ဆန္ဒာဓိက ရဲ့ သဘောထား အမြင် နှင့် တစ်ထပ်တည်း ကျပါတယ် ။
ဖြစ်စဉ်က ရှင်းရှင်းလေးပါ ။
ပီနန် ဆရာတော်ဘုရားကြီး က မဟာသန္တိသုခကျောင်းတိုက် ကို စထောင်တယ် ။
ဗုဒ္ဓ ဘာသာ ထုံးစံ အရ ၊ လှူရာမှာ အကျိုးများအောင် သံဃာကို လှူတယ်လို့ သုံးတယ် ။
တကယ့် တကယ် ကတော့ ၊ ပီနန် ဆရာတော်ဘုရားကြီး အမှူးထား အုပ်ချုပ်ဖို့ လှူတာပါ ။
အဲဒီတော့ ၊ ပီနန် ဆရာတော်ဘုရားကြီး နာမည် နှင့် ဂရန် အမည်ပေါက် ထွက်တယ် ။
ကျောင်း ဆောက်လုပ်နေဆဲမှာ ၊ ၂၀၀၇ ရွှေဝါရောင် သံဃာ့ အရေးအခင်း ဖြစ်တယ် ။
ပီနန် ဆရာတော်ဘုရားကြီး က ၊ ရွှေဝါရောင် သံဃာတွေ ဘက်က ထောက်ခံတယ် ။
ပီနန် ဆရာတော်ဘုရားကြီး မြန်မာပြည် ပြန်လာလို့ မရတော့ဘူး ။
အခုမှ ၊ လူယုတ်မာ / ဗီလိန် ရဲ့ အခန်း က ဝင်လာတယ် ။
ဗိုလ်ချုပ် ခင်ညွန့်က ၊ မဟာသန္တိသုခကျောင်း ကို သိမ်းလိုက်တယ် ။
မဟာသန္တိသုခကျောင်း ကို ပြီးအောင် ဆောက်လိုက်တယ် ။
ပီနန် ဆရာတော်ဘုရားကြီး ဘာမှ ဆက်လုပ်လို့ မရတော့အောင် ၊
မဟာသန္တိသုခကျောင်း ကို သံဃာ့ မဟာ နာယက ( မဟန ) ကို လှူလိုက်တယ် ။
ပွဲပြီး ရိုက်လိုက်တာလေ ။
အခုမှ ၊ လူယုတ်မာ / ဗီလိန် ရဲ့ အခန်း ပြီးတော့ ၊ လူညံ့ ရဲ့ အခန်းက ဝင်လာတယ် ။
ဗိုလ်ချုပ် ခင်ညွန့်က ၊ မဟာသန္တိသုခကျောင်း ကို လှူဒါန်းတာကို ၊
အဲဒီ အချိန်က သံဃာ့ မဟာ နာယက ( မဟန ) က လက်မခံသင့်ဘူး ။
ပီနန် ဆရာတော်ဘုရားကြီး နာမည် နှင့် ဂရန် အမည်ပေါက် တောင် ထွက်ထားပြီးပြီလေ ။
ဘုန်းဘုန်း အရှင်ဆန္ဒာဓိက ရဲ့ စကားကို ယူသုံးရရင် ၊
” ပီနန် ဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုယ်တိုင်က ကြည်ကြည်ဖြူဖြူ ကျေကျေနပ်နပ် နဲ့ ၊
စွန့်လွှတ်လိုက်တာ ၊ မ ဟုတ်တဲ့ အတွက် ကြောင့် ၊
ဒီကျောင်းကို သိမ်းယူတယ် ဆိုတာ ၊ ခိုးယူတာနဲ့ အတူတူပဲပေါ့နော် “
အဲဒီ အချိန်က သံဃာ့ မဟာ နာယက ( မဟန ) က လက်မခံသင့်တာကို လက်ခံမိတဲ့ အတွက် ၊
အခုလို အရှက်ရ စရာ ပြဿနာကြီး ပေါ်ပေါက်လာရတာဘဲ ။
အို ကေ ပါ ။ ဒီ အထိ က ၊ သိပ် မ ရှုပ်ထွေးသေးပါဘူး ။
သံဃာ အချင်းချင်း ကျောင်းလုတဲ့ ပြဿနာ အဆင့်ဘဲ ရှိသေးတယ် ။
မ ဟ န ၊ သာသနာရေး ဝန်ကြီး ဋ္ဌာန နှင့် ရဲတပ်ဖွဲ့ က ၊
ပီနန် ဆရာတော်ဘုရားကြီး မရှိချိန် ၊ ဂျပန် ခန ကြွသွားတဲ့ အချိန်မှာ ၊
ညကြီး အချိန်မတော်မှ မဟာသန္တိသုခကျောင်း ကို ဝင်စီးနင်းတယ် ။ ချိတ်ပိတ်တယ် ။
ကက ။ ပီနန် ဆရာတော်ဘုရားကြီး မရှိချိန် နှင့် ၊
ခခ ။ ညကြီး အချိန်မတော် မှ ဝင်စီးနင်းတဲ့ ၊
ပုံစံ နှင့် စိတ်ဓါတ် ကို မကြိုက်လှဘူး ။
ချိတ်ပိတ်တာ ကိုတော့ ၊ ဘာမှ သိပ်မပြောလိုလှပါ ။
ဥပဒေကြောင်းအရ လုပ်သင့်တာ လုပ်တယ် ဘဲ မှတ်ပါတယ် ။
အဆိုးဆုံး အချက်ကတော့ ၊
ပီနန် ဆရာတော်ဘုရားကြီး ကျောင်းမှာ စောင့်ရှောက်ဖို့ ချန်ထားခဲ့တဲ့ သံဃာ ( ၅ ) ပါး ကို ၊
အတင်း သိက္ခာချ ရဟန်းဝတ် ချွတ်ပြီး ၊ အင်းစိန်ထောင်ထဲ ထည့်လိုက်တာပါဘဲ ။
ဒီ ကိစ္စ ကို ၊ လုံးဝ ( လုံးဝ ) လက်မခံနိုင်ပါဘူး ။
ဒါဟာ စစ်အာဏာရှင် စတိုင် အကြမ်းဖက်တဲ့ မ တရားမှု ( မ တရားမှု ) ပါ ။
အဲဒီတော့ကာ ၊ Final Conclusion ဆွဲရရင်တော့ ၊
မူလ ပိုင်ရှင် = ပီနန် ဆရာတော်ဘုရားကြီး ။
ပထမ လူယုတ်မာ / သူခိုး = ဗိုလ်ချုပ် ခင်ညွန့် ။
ခိုးရာပါ ပစ္စည်း လက်ခံသူ = သံဃာ့ မဟာ နာယက ( မ ဟ န ) ။
ဒုတိယ လူယုတ်မာ / အကြမ်းဖက်သူ = အံ့မောင် ။
ဒီ မ တရားမှု အတွက်ကတော့ အပြစ် ရှိခဲ့သူတွေဟာ ပြန်လည်ပေးဆပ်ရမှာပါ ။
အကြမ်းဖက် ရဟန်းဝတ် ချွတ်မှု အတွက်ကတော့ ၊
အကြံပေး အံ့မောင် လား ၊ ဝန်ကြီး ဦးဆန်းဆင့် လား ၊ စတေးခံရတော့မှာပါ ။
ခိုးရာပါ ပစ္စည်း လက်ခံမိမှု အတွက်ကတော့ ၊
သံဃာ့ မဟာ နာယက ( မ ဟ န ) က ထေရ်ကြီး ဝါကြီး တွေက ၊
တာဝန်ခံ ဖြေရှင်းပေး ရပါတော့မယ် ။
( မ ဟ န မှာ ဂုဏ်သိက္ခာ နှင့် သတ္တိ သာ ရှိခဲ့ရင်ပေါ့ )
( မ ဟ န မှာ ဂုဏ်သိက္ခာ နှင့် အရှက် မရှိဘူး ဆိုရင်တော့ ဒီအတိုင်းလေးဘဲ ဆက်မှိန်းနေကြပေါ့ )
ဟဲ ဟဲ ၊ ဒါကတော့ အဘ ရဲ့ သဘောထား အမြင်လေးတွေပါ ။
ရွာသူားတို့ကော ဘယ်လို သဘောရကြပါသလဲ ။
ဆရာတော် အရှင် ဆန္ဒာဓိက
ဖမ်းဆီးခံ သံဃာငါးပါး၏ထောင်တွင်းအတွေ့အကြုံနှင့် သုံးသပ်မိန့်ကြားချက်များ
အဂ္ဂမင်း ရေးသားသည်။ ၊ Flower News Journal အတွဲ (၁၀) အမှတ် (၂၄)
” မဟာသန္တိသုခ ကျောင်းတော်ကြီးအတွင်းမှဖမ်းဆီး၍ လူဝတ်လဲကာ အင်းစိန် အကျဉ်းထောင်တွင်း ထိန်းသိမ်းထားသည့် အင်္ဂလန်ဆရာတော်ဦးဥတ္တရအပါအဝင် သံဃာ တော်ငါးပါးအား ဇွန် ၂ဝ ရက်တွင် အာမခံဖြင့် ပြန်လည်လွှတ်ပေးခဲ့ပြီးနောက် သုံးထပ် ကျောင်းတိုက်တွင် သိက္ခာထပ်ပြီးသည့်အခါ ၄င်းတို့ကြုံတွေ့ခံစားခဲ့ရသည့် အတွေ့အကြုံ များကို ယင်းဆရာတော်များမှ ဖလားဝါးနယူးစ်ဂျာနယ်သို့ မိန့်ကြားခဲ့ပါသည်။”
မဟာသန္တိသုခ ကျောင်းတော် ကြီးဆီ ရောက်ရှိနေသော ဆရာတော်ဦးသုန္န ရမှာ အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှ ဆရာတော်ဦးဥတ္တရ ရောက်ရှိနေသဖြင့် မနက်ခင်းကတည်းက တည်းခိုနေထိုင်သော ကမ္ဘာအေးကုန်းမြေ မှ မဟာသန္တိသုခကျောင်းတော်ကြီးသို့ ရောက် ရှိနေခဲ့သည်။
ဆရာတော်နှင့် တရားအကြောင်း အရာများ နိုင်ငံခြားတွင် ဗုဒ္ဓဘာသာကျောင်း များ ဘယ်လောက်ထွန်းကားနေပြီ ဆိုသည် များကို နာခံ မှတ်သားနေခဲ့သည်။ နေ့ဆွမ်း စားပြီးချိန်လောက် ကျောင်းတိုက်အပြင်ဘက် တွင် လုံခြုံရေးရဲများ ရောက်နေသည်ကို တွေ့ ရှိသဖြင့် စိတ်ထဲတွင် ထူးခြားနေမှန်းသိနေ သည်။ မွန်းလွဲချိန် ရောက်သည့်အခါတွင် ကျောင်းတိုက်မှ သံဃာများ၏ ပြောပြချက် အရ ကျောင်းတိုက်မှ သံဃာများအား ဖယ် ရှားတော့မည်ဟု သိလိုက်ရသည်။ သိသိချင်း စိတ်အတော်ပင်လှုပ်ရှား သွားမိသည်။
အကယ်၍ ထိုအချိန်ကမ္ဘာအေး ကျောင်းတိုက်သို့ ပြန်သွားမည်ဆိုပါက ကျောင်း တိုက်တွင် ကျန်ရှိသည့်သံဃာများကို သစ္စာ မဲ့ရာ ကျပေမည်။ ဆရာတော်ဆုံးဖြတ်လိုက် ပါသည်။ ကျောင်းတွင် ကြုံတွေ့လာရမည့် ဖြစ်သမျှ ကျောင်းရှိသံဃာများနှင့် စုပေါင်း ဖြေရှင်းကြမည်ဟု ဆရာတော်ဦးသုန္နရ ဆုံး ဖြတ်ခဲ့သည်။
တနင်္သာရီတိုင်း သရက်ချောင်း မြို့ သရက်ချောင်းကျောင်းတိုက်တွင် သီတင်း သုံးသည့်ဆရာတော်ဖြစ်ပြီး နိုင်ငံတော် ပရိ ယတ္တိသာသနတက္ကသိုလ်မှာ ဗြ(ွှ့နျငျ) ကျမ်းပြုစုထားသည့် ဆရာတော်တစ်ပါးလည်း ဖြစ်သည်။
”အဲဒီတုန်းက ဦးဇင်းတွေးနေ တယ်။ တစ်ခုခုတော့ ဖြစ်တော့မယ်။ ကောင်းတဲ့လက္ခဏာတော့ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ ဦးဇင်း သိတယ်။ ညကျမှ သိလိုက်ရတာက နောက် ကျသွားပြီလေ။ ဦးဇင်းတို့ အမှန်တကယ် ကို ဘာမှ ပြင်ဆင်ချိန်မရလိုက်တာ ကြိုပြီး တော့သိရင် ဦးဇင်းတို့ဆင်းမှာပါ။ အားလုံး ကလဲ ဘာမှပြင်ဆင်ချိန်မရဘူး။ နောက် တော့ ဖမ်းသွားတာပဲပေါ့”ဟု ဆရာတော် က ပြောပြသည်။
ကျောင်းတိုက်နှင့် သံဃာတော် များ မည်သို့ ပတ်သက်ပုံကိုလည်း ယခုလို ဆရာတော်က ဆက်လက်မိန့်ကြားသည်။
”ဒီကျောင်းတိုက်က ဆရာတော် တွေဆိုတာကလဲ ပီနန်ဆရာတော်ကြီးနဲ့ တိုက်ရိုက်မသက်ဆိုင်ဘူး။ ဒါပေမဲ့ ပီနန် ဆရာတော်ကြီးနဲ့ နိုင်ငံခြားမှာ တပည့်တော် ခဲ့ရင်တော်မယ်။ ဒီလိုပတ်သက်မှုပဲ ရှိတဲ့အ တွက် ဘာမှ ဦးဇင်းတို့က မသိဘူး”ဟု မိန့် ကြားသည်။
ယခုလို အာမခံဖြင့် လွတ်မြောက် ခဲ့ပြီးနောက် ဆရာတော်၏ ခံစားချက်များ ကိုလည်း ယခုလို ဆက်လက်မိန့်ကြားသည်။
”မြန်မာတစ်မျိုးသားလုံးပဲ အမျိုး ဘာသာ သာသနာအရေးမှာ နောက်မကျ ဘဲနဲ့ အားပေးကာကွယ်တဲ့အတွက်ကြောင့် အခုလို ပြန်လည်လွတ်ခွင့်ရတာပါ။ အရင် တုန်းကဆိုရင်တော့ အဲဒီလောက်မသိခဲ့ဘူး။ အပြင်နဲ့ ဦးဇင်းတို့က အဆက်ပြတ်နေတာ ၁ဝ ရက်လောက်ရှိပြီလေ။ အပြင်ကိုရောက် လာတော့ ဦးဇင်း မျက်ရည်လည်တယ်။ မျက် ရည်ပါ ကျတယ်။ ကိုယ့်ဟာကို ဝမ်းနည်း တာလဲ ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဦးဇင်းက အငြိုးအ တေးမထားပါဘူး။ ဦးဇင်းတို့ ကိုယ်၌ကဖြစ် ချိန်တန်လို့ ဖြစ်တယ်ပဲ”ဟု မှတ်တော်မူ ကြောင်း မိန့်ကြားသည်။
ဆရာတော်သည် ကျမ်းပြုစုပြီး နောက် တောင်တန်းသာသနာပြုရန် စောင့် ဆိုင်းနေစဉ်ကာလအတွင်း ယခုကဲ့သို့ ဖြစ် ပွားခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်။
”အဲဒီမှာဦးဇင်းတို့ စာသင်သား သံဃာတွေဆိုတာကလဲ ကျောင်းမှာ မမြဲ ဘူး။ အဲဒီနေ့က လန်ဒန်က လက်ထောက် ဆရာတော်ဦးဥတ္တရက မဟာသန္တိသုခ ကျောင်းကို ရောက်နေတယ်ဆိုတာ ဦးဇင်း တို့သိရတော့ နိုင်ငံခြားပြန်ဆိုရင် ဒီမှာက ဦးဇင်းတို့လဲ ဖူးချင်တာပေါ့။ တွေ့ချင်တာ နဲ့ အဲဒီနေ့က သွားတာပါ။ အဲဒီနေ့မနက် ခင်းကတည်းက ရောက်နေတာ။ အဲဒီနေ့က ဝင်စီးတော့ စိတ်လဲလှုပ်ရှားတယ်။ ဝမ်းလဲ နည်းတယ်။ ဦးဇင်းတို့ဘဝမှာ ၁၃နှစ်သား ကိုယ်ရင်ဝတ်ပြီးကတည်းက တစ်ခါမှ ဒီလို မကြုံဖူးဘူး။ အဲဒီလိုမျိုးဖြစ်တော့ ဝမ်းနည်း တယ်။ ဘယ်သူ့အပေါ်မှတော့ အငြှိးအတေး မထားပါဘူး”။
ဆရာတော်မှာ ဖမ်းဆီးအကျဉ်း ကျခံရချိန် ကြုံတွေ့ရသည်များကိုလည်း ယခုကဲ့သို့ မိန့်ကြားခဲ့ပြန်သည်။
”ဦးဇင်း ထောင်ထဲမှာ နေတုန်း ကလဲ အဲဒီလိုမျိူးပဲ၊ အထူးသဖြင့် ထောင် ဝန်ထမ်းတွေကို ချီးမွမ်းချင်တယ်။ မိသားစု လိုပဲ ဦးဇင်းတို့ကို လိုလေသေးမရှိအောင် ထားကြပါတယ်။ ပြုစုကြပါတယ်။ အဲဒီကျေး ဇူးတွေကိုလဲ ဦးဇင်းမမေ့ပါဘူး။ အစကမ သိဘူးလေ တအားကြီးလဲ ကြောက်လန့်နေ တာပေါ့။ ဒါပေမဲ့ ထောင်ဝန်ထမ်းတွေက ကောင်းကောင်းမွန်မွန် ဆက်ဆံကြပါတယ်” ဟု မိန့်ကြားသည်။
ဆရာတော်ဦးသုန္နရကဲ့သို့ ဖမ်း ဆီးခံရသည့် ဆရာတော်များထဲတွင် တစ် ပါးအပါအဝင်ဖြစ်သည့် ဆရာတော်ဦးနန္နိ ယမှာ ပီနန်ဆရာတော်ကြီး မဟာသန္တိသုခ ကျောင်းတော်ကြီးသို့ရောက်ရှိလျှင် သီတင်း သုံးသည့်အခန်းတွင် သီတင်းသုံးပြီး ပီနန် ဆရာတော်ကြီး၏ ဝေယျာဝစ္စများကို အလုပ် အြေ<ွကးပြုရသော အနီးနေ သံဃာတော်တစ် ပါးဖြစ်သည်။
ဆရာတော်က အဆိုပါအဖြစ် အပျက်အား ကြုံတွေ့ခဲ့ရပုံများနှင့် အင်းစိန် ထောင်အတွင်း တွေ့ကြုံခဲ့သည်များကို ယခု ကဲ့သို့ မိန့်ကြားခဲ့သည်။
''ရောက်ရောက်ချင်း ရွှေတိဂုံဘု ရား အရှေ့ဘက်မုဒ်ကနေပြီးတော့ နေ့ခင်း ၁၂ နာရီလောက်ကနေ သင်္ကန်းတွေချွတ် ပြီး တရားရုံးကို သွားရမယ်လို့ပြောတယ်။ တရားရုံးက ဦးဇင်းတို့ကို ဘာပြောသလဲဆို တော့ ဒကာကြီးဦးစိန်မောင်က ဦးဇင်းတို့ ငါးပါးကို တရားစွဲထားတယ်လို့ ပြောတယ်။ အဲဒီလိုလဲပြောပြီးရော ဘုန်းကြီးတို့ကို အင်း စိန်ကို ပို့တယ်။ ပို့ပြီးတော့ အင်းစိန်မှာ အ ခန်းလေးတွေနဲ့ တစ်ပါးကိုတစ်ခန်း၊ တစ် ပါးကို တစ်ခန်းနဲ့ ထားတယ်။ အခန်းက ငါး ပေပတ်ချာလည်လောက်တော့ ရှိမယ်။ အိပ် တော့လဲ အဲဒီမှာပဲ အိပ်၊ ကျင်ကြီးကျင်ငယ် ကိုလဲ အဲဒီမှာပဲ စွန့်ပေါ့၊ အခန်းထဲမှာပဲ အ ညစ်အကြေးစွန့်ဖို့ ထားပေးထားပါတယ်။ ကျိန်းတော့ စောင်ပဲခင်းရတာပေါ့။ ခေါင်း အုံးက အုံးလို့ မရဘူးလို့ပြောတယ်။ အဲဒီမှာ ဦးဇင်းတို့အပေါ်ကိုတော့ ဝန်ထမ်းတွေက ကောင်းပါတယ်။ အဲဒီထဲမှာတော့ ကုဋီတွေ ဘာတွေတော့ မရှိဘူးပေါ့။ ဒါပေမဲ့အဆင် ပြေပါတယ်။ တစ်နေ့ကို မနက် ၇ နာရီက နေ ၈ နာရီ တစ်ကြိမ်၊ ညနေကျတော့ တစ် ကြိမ် အပြင်ထွက်ရတယ်။ အဲဒီ့ဝင်းထဲမှာပဲ ခြေလက်ဆေး၊ မျက်နှာသစ်၊ အာရုံဆွမ်း ဘုန်းပေးပြီး ပြန်ဝင်ရတယ်။ ၁၁ နာရီလောက် ကျတော့ ပြန်ထွက်၊ နေ့ဆွမ်စားဖို့ ပြန်ထွက် ပြီးတော့ ပြန်ဝင်ပေါ့။ ၁၂ မတ်တင်းလောက် ကျတော့ပြန်ဝင်၊ ဝန်ထမ်းတွေလဲပြန်သွား။ ဦးဇင်းတို့ကို ကူညီပေးဖို့ ထောင်သား နှစ် ယောက်နဲ့ စစ်သား တစ်ယောက်ကို ထား ပေးတယ်။ သူတို့က ဦးဇင်းတို့ ဝေယျာဝစ္စ လုပ်ပေးပေါ့။ လောလောဆယ်တော့ ဇွဲက ပင်ဆရာတော်ကြီးဆီမှာပဲ သီတင်းသုံးမှာ ပါ''ဟု မိန့်ကြားသည်။
နိုင်ငံတော်သံဃမဟာနာယက တက္ကသိုလ်တွင် ကယားပြည်နယ်အဆောင် မှူးအဖြစ်
တာဝန်ယူကာ ကမ္ဘာအေးကုန်းမြေရှိ သံဃာ့တက္က သိုလ်ဝင်းအတွင်း နေထိုင်သည့် ဆရာတော်ဦးတေ ဇိန္နသည်လည်း ဖမ်းဆီးခံရသည့်အထဲတွင်တစ်ပါး ပါဝင်သည်။ ဆရာတော်သည် ယင်း၏မိတ်ဆွေဖြစ် သူ ဦးပညာစာရနှင့် မဟာသန္တိသုခကျောင်းကြီးသို့ လိုက်ပါလာစဉ်အတွင်း ဖြစ်ပျက်ခဲ့ပုံများကို ယခု ကဲ့သို့ မိန့်ကြားခဲ့သည်။
''ခဏတစ်ဖြုတ် အလည်လာရင်းနဲ့ ပြန် ထွက်မရ ဖြစ်သွားတာ။ ဦးဇင်းက တက္ကသိုလ်မှာ နှစ်နာရီ စာချတယ်။ စာချပြီးတော့ သူငယ်ချင်း တစ်ပါး ဈာပနအတွက် ယပ်တောင်ကို စလင်း ကွင်းနားက ထားဝယ်ကားဂိတ်မှာ သွားပို့ကြတယ်။ အဲဒီမှာ ဆရာတော်ဦးပညာစာရက ကျောင်းခဏ လိုက်ခဲ့။ ကျောင်းမှာ စာချဖို့ကိစ္စ ပြောစရာရှိတယ် ဆိုတာနဲ့လိုက်လာတာ။ ဘုန်းဘုန်းတို့ကလဲ ကျောင်း စာနဲ့ ကိုယ့်အာရုံနဲ့ကိုယ် လောနေတာဆိုတော့ အပြင်မှာ ဘာဖြစ်မှန်းမသိဘူး။ ပြီးတော့ အပြင် မှာ ရဲတွေလဲလာတယ်။ လုံထိန်းတွေလဲလာတယ် ဆိုတော့ အပြင်ထွက်လို့မရဘူး။ နောက်ပြီး သူ ငယ်ချင်းကလဲရှိတော့ မထွက်ဘဲနဲ့ နေလိုက်တာ ညနေလဲရောက်ရော ရုန်းရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်ပြီး ပြန် ထွက်မရဖြစ်ကာ နောက်ဆုံးအဖမ်းခံလိုက်ရတာ ပဲ''ဟု မိန့်တော်မူသည်။
ထောင်တွင်းအတွေ့အကြုံများကိုလည်း ဆရာတော်က ယခုကဲ့သို့ မိန့်ကြားသည်။
''အင်းစိန်ထောင်ရောက်တော့လဲ သူ တို့ စည်းကမ်းအတိုင်းပဲပေါ့။ အရမ်းကြီးလဲမတင်း ကျပ်သလို အရမ်းကြီးလဲ လွှတ်မထားဘူး။ ဘယ် သူနဲ့မှတော့ တွေ့ခွင့်မရဘူး။ တိုက်ပုံစံက ၁ဝခန်း တွဲနှစ်ဆောင်မှာ နေရတာ ကျယ်ဝန်းပါတယ်။ ဘုန်းဘုန်းလမ်းလျှောက်ချိန် လမ်းလျှောက်ကြည့် တဲ့အခါ လူသွားစင်္ကြန်က ဘုန်းဘုန်းခြေလှမ်းနဲ့ ၁ဝ၈ လှမ်းလောက်ရှိတယ်။ နေရတဲ့ အဆောင်က တော့ ၁၂လှမ်းလောက်ရှိတယ်။ ကွပ်ပျစ်ပေါ်မှာ အိပ်တယ်။ ဆွမ်းစားပြီးရင်ပရိတ်ရွတ်မယ်။ ပဋ္ဌာန်း ရွတ်မယ်။ ဒါပဲ ဘုန်းဘုန်းလုပ်တယ်။ ဘုန်းဘုန်း အတွက်ကတော့ ဘာမှမဖြစ်ဘူး။ ကိုယ့်ကံကြောင့် ဖြစ်တာလေ။ ရှင်မောဂ္ဂလန်တောင်မှ ဖြစ်ခဲ့သေး တာပဲ။ ဘုန်းဘုန်းအနေနဲ့ အတိတ်ကံမကောင်း လို့ ခံရတယ်ပဲ သဘောထားပါတယ်။ ဘုန်းဘုန်း တို့ငါးပါးကို သီးသန့်ထားတယ်။ တစ်ခန်းစီပေါ့။ အဲဒီကအကျဉ်းသားတွေက ဘုန်းကြီးတွေနဲ့လဲ မတွေ့တာကြာနေကြတော့ ဘုန်းကြီးတွေမှန်းလဲ သိတော့ သူတို့ရဲ့ငပိကြော်လေးတွေ လက်ဖက်သုပ် လေးတွေ လာကပ်ကြတာပေါ့။ ဘုန်းဘုန်းတို့က လဲ အဲဒီအတွက်ကျေးဇူးမမေ့ပါဘူး။ ဒီလိုဖြစ်တာ ကလဲ အတိတ်ကကံကြောင့်ပါပဲ''
ဆရာတော်ဦးဥတ္တရ (အင်္ဂလန်ဆရာ တော်)သည် ယခုကဲ့သို့ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံခဲ့ရ သည့်အပေါ် သဘောထားအား အာမခံဖြင့်လွတ် မြောက်ခဲ့သည့် ဇွန် ၂ဝရက်တွင် ဇွဲကပင်ကျောင်း တိုက်၌ သတင်းမီဒီယာများအား ယခုကဲ့သို့မိန့် ကြားခဲ့သည်။
''ဘုန်းကြီးတို့ အခုလို ထောင်ကျတာ၊ တရားစွဲခံရတာတွေဟာ ဘုန်းကြီးတို့ ကိုယ်တိုင်တင် မဟုတ်ဘူး တခြားဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမှ မဖြစ်စေချင် ဘူး။ အဲဒီတော့ တရားမျှတတဲ့ဘက်ကနေ မှန်မှန် ကန်ကန်နဲ့တရားစီရင်တဲ့ကဏ္ဍတွေမှာ အားလုံးက ဝိုင်းဝန်းကူညီတယ်ဆိုတာ တိုင်းပြည်ရဲ့သာသနာ အတွက် ကူညီရာရောက်ပါတယ်။ နောက်ဘယ် နေရာပဲဖြစ်ဖြစ် သူဖြစ်ရင် ကိုယ်လဲဖြစ်နိုင်တာပဲ ဆိုတဲ့ အသိတရားလေးရှိဖို့ အားလုံးကသဘော ပိုက်တားကြပါ။ အခုဘုန်းကြီးတို့ တရားရင်ဆိုင် ကြရဦးမယ်။
အခုကအာမခံနဲ့လွှတ်တာဆိုတော့ ၂၇ရက်မှာ တရားရင်ဆိုင်ရဦးမယ်။ ဒါကိုဘုန်းကြီး တို့ လုံးဝမကြောက်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ မဟုတ်တမ်းတ ရား မမှန်မကန်စွပ်စွဲတာတွေကိုတော့ ဘုန်းကြီးတို့ လုံးဝမခံဘူး။ ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမဆို ကိုယ်မှားရင်မှား တယ်ဆိုတာ ကြီးကြီးငယ်ငယ်ဝန်ခံရဲရမယ်။ ဘုန်း ကြီးတို့က မှန်ကန်တဲ့အတွက် မကြောက်ပါဘူး။ နိုင်ငံတော်သံဃမဟာနာယက ဖြစ်ပေါ်လာတယ် ဆိုတာ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေပါပဲ။ ဒီ လွှတ်တော်နဲ့တူတဲ့ သံဃမဟာနာယကဟာ သံ ဃာတော်တွေကို တရားစီရင်ရေးမှာ မျှတတယ် မမျှတဘူးဆိုတာ ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ စဉ်းစားÓဏ် နဲ့ ပြုပြင်နိုင်ကြပါစေလို့လဲ ဘုန်းကြီး ပန်ကြား လျှောက်ထားလိုပါတယ်''။
အင်္ဂလန်ကျောင်းဆရာတော် ဦးဥတ္တရ က ထောင်တွင်းအတွေ့အကြုံအား အောက်ပါအ တိုင်း မိန့်ကြားခဲ့သည်။
''တကယ့်အရေးကြီးတဲ့ အချုပ်တွေ ဘာတွေ ထားတဲ့နေရာမှာထားတာပါ။ ဒီတိုင်းပါ ပဲ အဆင်ပြေပါတယ်။ အိပ်တာတော့ ကွပ်ပျစ်ပေါ် မှာအိပ်ရပါတယ်။ ထားတဲ့အခန်းတွေက သန့်ရှင်း ပါတယ်။ တစ်ခုပါပဲ လေဟာပြင်ဆိုတော့ ခြင်ကိုက် တာပေါ့။ ဒါပါပဲ။ ကျန်တာတော့ဘာမှမရှိပါဘူး''။
ဆရာတော်သည် လက်ရှိတွင် မဟာ သန္တိသုခကျောင်းတော်ကြီး မည်သူပိုင်ဆိုင်သည် ကို မပြောနိုင်သေးကြောင်း၊ လက်ရှိအာမခံရရှိထား ချိန်တွင် ဇွဲကပင်ဆရာတော်ကြီး၏ သုံးထပ်ကျောင်း တိုက်သို့ ကြွရောက် သီတင်းသုံးနေထိုင်မည်ဖြစ်ပြီး အမှုကိစ္စပြီးပြတ်မှသာ အင်္ဂလန်နိုင်ငံသို့ ပြန်ကြွမည်ဟုလည်း သိရသည်။
ဇွန် ၂ဝ ရက်တွင် ဖမ်းဆီးခံသံဃာတော် များ ပြန်လည်၍အာမခံဖြင့် လွတ်မြောက်လာပြီး နောက် တူညီသောစကားတစ်ခွန်းကို မိန့်ကြားခဲ့ ကြသည်။ ထိုစကားမှာ ''ဘုန်းဘုန်းတို့ဘယ်သူ့မှ အပြစ်မတင်ပါဘူး။ ဘယ်သူ့အပေါ်မှာမှလဲ အာ ဃာတတွေ၊ အငြှိုးတရားတွေ မထားပါဘူး''ဟူ၍ ပင်ဖြစ်သည်။
မဟန ဆရာတော်ကြီးတွေမှာလည်း အကျင့်သီလနဲ့ ပြည့်စုံတဲ့ ဆရာတော်ကြီးတွေ အများကြီးပဲ။
ဆရာတော်ကြီးတွေအနေနဲ့ အသုံးချ မဖြစ်သင့်ဘူး။
မဟနဆရာတော်ကြီးတွေ ဘက်ကလည်း ဖြစ်သင့်ဖြစ်ထိုက်တာကို ဖြေရှင်းပြောဆိုဖို့ လိုတယ်လို့ထင်တယ်။
အဲဒါကြောင့် မဟနဆရာတော်ကြီးတွေ ပြောတာကိုလည်း နားထောင်ချင်သေးတယ်။
ဒါကို ဆွေးနွေးဖို့က အလွန်ကျယ်ဝန်းတယ်….
ဒီတော့ ခေါင်းစဉ်လေးတွေ အရင်ချကြည့်တာပေါ့……
၁။ အဲသည်ကျောင်းနဲ့ ကျောင်းဝင်းကြီးကို ဘယ်သူပိုင်သလဲ။ ပီနန်ဆရာတော်ကြီးပိုင်တာဟုတ်ရဲ့လား..
၂။ အခု အမှု့အခင်းမဖြစ်ခင် ဘာတွေဖြစ်နှင့်ခဲ့သလဲ……
၃။ ပီနန်ဆရာတော်ကြီးအဖွဲ့နဲ့ မဟန ကြား မှာ ဘာတွေရှိသလဲ……
၄။ အခုအမှု့အခင်းကို ကိုင်တွယ်ပုံ
နောက်ဆုံးက စပြီး ဆွေးနွေးမယ်ဗျာ…..
နဲနဲလဲ (မအောင့်နိုင်လို့) ဆဲပါရစေ….
အခု အမှု့အခင်းကို ကိုင်တွယ်ပုံဟာ
ယုတ်မာ ရိုင်းစိုင်းလွန်းတယ်။ လုံးဝ လက်မခံနိုင်စရာဖြစ်တယ်။ ထေရ၀ါဒ သာသနာကို အိုးမဲသုတ် သိက္ခာချလိုက်တာပဲဖြစ်တယ်။
အဲဒါကို စီစဉ်လုပ်ကိုင်တဲ့ ခွေးမသားတွေသိဖို့က သာသနာတော်ရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာနဲ့စာရင် ဒီကျောင်းစုတ်က ဘာမှမတန်ဘူးဆိုတာပဲ….
ကျောင်းပေါ်မှာ မဖယ်ပဲ နေတဲ့ဘုန်းကြီးတွေကို ဖမ်းဆီးရာမှာ
ရာဇ၀တ်သားတွေကို ထားတဲ့ ထောင်ထဲ ထည့်ထားတာရယ်….
အမှု့ရင်ဆိုင်ဖို့ လူဝတ်လဲစတမ်းဆိုရင် တရားလိုဖြစ်မယ့် မဟနဘုန်းကြီးတွေရော တရားရုံးမှာ လူဝတ်လဲပြီး တရားရင်ဆိုင်မှာလား…
(တရားလိုကျတော့ ဘုန်းကြီးတွေကို ထုတ်မသုံးပါ။ သာထွန်းပြန့်က လက်ဝင်ခံပါတယ်)
ပြီးတော့ ဒီနိုင်ငံ ဒီရေမြေမှာ ဘုန်းကြီးတွေကို ထားစရာရှားလို့ ထောင်ထဲထည့်ရသလား
မသကာ မဟန ကျောင်းတစ်ခုခုမှာဖြစ်ဖြစ်၊ အခြားတည်းခိုဆောင်တစ်ခုခုမှာဖြစ်ဖြစ်၊
ဒီနှစ်ချက်နဲ့တင် သာသနာတော်ကို ညှိုးနွမ်းစေမှု့နဲ့ တာဝန်ရှိတဲ့ခွေးသတောင်းစားတွေကို ထောင်ချသင့်နေပြီ
ဆဲရေးရှိက ဆဲအပ်လှ၏ တဲ့…။
ဗုဒ္ဓသာသနာ နေလိုလလို ထွန်းလင်းတောက်ပြောင်နေသော
သံဃာတော်တွေကို ၀ါးရင်းတုတ်နဲ့လည်း ခင်ဗျားတို့ ရိုက်ခဲ့ဖူးပြီ…။
သံဃာတော်တွေကို မီးလောင်ဗုံးနဲ့လည်း ခင်ဗျားတို့ ဖေါက်ခွဲခဲ့ဖူးပြီ…။
အခုနောက်ဆုံး…သံဃာတော်တွေကို အဓမ္မ ဖမ်းဆီးပြီး သင်္ဃန်းဆွဲချွတ်လို့
ထောင်ထဲလည်း ခင်ဗျားတို့ ထည့်ခဲ့ဖူးပြီ…။
အဲဒီသံဃာဆိုတာ ရတနာ သုံးပါးထဲက တစ်ပါး ဆိုတာရော ခင်ဗျားတို့ မေ့ထားကြပြီလား…။
ခင်ဗျားတို့ ခေတ်ရောက်မှ သံဃာတော် တွေ ရဲ့ ပုံရိပ် မှေးမှိန်ကျဆင်းခဲ့ရပြီ…။
ဒီလိုလုပ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ချက်ချတာ ဘယ်သူလဲ…။
ဆုံးဖြတ်ချက်ချပေးလိုက်လို့ ရှေ့မကြည့်နောက်မကြည့် လုပ်ရဲကြတာပေါ့…။
ဆုံးဖြတ်ချက်ချပေးခဲ့တဲ့ အဲဒီကောင် ဟာ သာသနာဖျက်ပဲ…။
ခင်ဗျားတို့ တစ်ဆွေတစ်မျိုးလုံး ကာလနာတိုက်တော့မယ်…။ သတိသာထားနေကြ…။
ဗုဒ္ဓဘာသာ သာသနာကို မှေးမှိန်ကျဆင်းအောင် လုပ်နေတာ
မူဆလင်တွေ မဟုတ်ဘူး…။ ခရစ်ယာန်တွေ မဟုတ်ဘူး…။
တရားခံက ခင်ဗျားတို့ သာသနာ ဖျက် တွေပဲ…။
ဒီလောက်တောင် အသိတရား မဲ့ရသလား ခွေးမသားတွေရယ်…။
(ကိုပါကြီး အဖေါ်ရအောင် ၀င်ဆဲပေးသွားတာ…။)
၈ ။အဲဒီတော့ကာ ၊ Final Conclusion ဆွဲရရင်တော့ ၊
မဟာသန္တိသုခ ကျောင်းတော်ကြီးကို လုရင်း ပြသနာရှိတာက ပီနန် ဆရာတော်ဘုရားကြီး နဲ့ သံဃာ့ မဟာ နာယက ( မ ဟ န )…
အခု အဖမ်းခံရတဲ့ဆရာတော်တွေနဲ့ ဘာမှလည်းမဆိုင်..အလွတ်ကြီး
ဘာပုဒ်မနဲ့ ဒီကိုယ်တော်တွေကို တရားစွဲတာပါလိမ့်…
မဟနဆိုတာက.. ခိုးချရင်းခိုးချရင်း..(ရှေး) ရိုမန်ကက်သလစ်ပုံစံခိုးယူတာလို့.. ထင်မိတယ်..။ ဘိုနေ၀င်းလက်ချက်ပေါ့…။
အုပ်ချုပ်သူ(မင်း)နဲ့.. ချခ်ျပူးတွဲပြီး တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တာပါ..။
သဘောမတူ.. ဘာသာမတူသူတွေ..ဆန်းသစ်တဲ့အတွေးအခေါ်ရှင်တွေကို.. မီးရှို့သတ်.. ခေါင်းဖြတ်.. စုံးဆိုပြီစွတ်စွဲ.. ရှင်းခဲ့ကြတာပေါ့…။
အဲဒီကက်သလစ်ကနေခွဲထွက်ပြီး.. ပရိုတက်စတင်န့်တွေက.. ဥရောပကနေပြေး… အမေရိကားကို… တည်ထောင်တယ်…
ဂေါတမဗုဒ္ဓက.. သံဃာတွေ.. ရဟန်းတွေကို.. အဲလိုအုပ်ချုပ်ရမယ်လို့.. မမှာခဲ့ပါဘူး..
ဦးပါနဲ့ ဦးဘလက် အဖော်ရအောင် အနော်ပါ ထပ်ပြီးကလော်တုတ်ပေးလိုက်ဦးမယ် ဘယ်နှယ့်ဗျာ ကျော်မကောင်းကြားမကောင်းဗျာ ကိုယ့်ရဲ့ Buddhism(ပတ်ဆင့်ရိုက်လို့မရပါသောကြောင့်) တွေအချင်းချင်း အထင်သေးသွားနိုင်တဲ့အပြင် ဘာသာခြားတွေလည်း အနော်တို့ ဘာသာကို ဘယ်လိုထင်သွားနိုင်သလဲဆိုတာ ခင်ဗျားတို့ နည်းနည်းလေးမှ မစဉ်းစားမိဘူးလား အာဏာရှင် ကျောရိုးမဲ့ အဆီစား အသားမျို နေတဲ့ ပက်ကျိတွေရဲ့ :buu:
ဘဖောရေးပြတော့လည်း ရှင်းသွားတာပဲ။ နယ်မှာက ဂျာနယ် အစုံမရဘူး။ အွန်လိုင်းဖွင့်ဖတ်လို့လည်း မရဘူး။ ခုတလော PR ဆိုတာကို ကြော် ဦးနှောက်တော်တော်ခြောက်နေတာ။